Hotsaraim-bahoaka mbamin’ny mpitondra… | NewsMada
Hotsaraim-bahoaka mbamin’ny mpitondra…
Fitsaram-bahoaka etsy, fitsaram-bahoaka eroa… Saika mandeha ho azy, mila hahahenika an’i Madagasikara. Tsy fantatra intsony izay tena antony fototra. Tsy misy ny fanadihadiana lalina ifotony, fa tombantombana no be. Tsy fahatokisan’ny vahoaka intsony ny mpitondra? Ao anatin’izany ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny lehiben’ny distrika…
Misy milaza fa efa korontana na fipoahana sosialy miainga any ifotony io. Ny amin’izay fitsaram-bahoaka izay no hanamparan’ny olona ny alahelony noho ny tsy firaharahana azy, ny fampisehoany fa tsoahiny ary miverina aminy ny fahefana nampindraminy ny mpitondra… tsy mahavoa raha. Na fanairana fotsiny izao ny mpitondra mba hijery azy…
Ny sasany te hanatsotra resaka hoe tsy fahalalan’ny vahoaka ny lalàna io, ka ezahina ny fampahafantarana izany, ny fampitandremana… Nahoana no tsy nirongatra be toy izao ny fitsaram-bahoaka, na maro sy niverimberina aza ny krizy saika amin’ny lafiny rehetra eto amin’ny firenena; eny, na ny fahasahirana sy fahantrana efa ho lava aza.
Tsy tena halalinina sy jerena ifotony izay tena anton’ny fitsaram-bahoaka, fa tombanana lavitra. Hany ka vahaolana kitsapatsapa sy tombana no handaminana azy: ala saritaka ihany, famonoana afo… Tsy mbola manohintohina ny fanjakana foibe, ka tsy mampiraika? Na rehefa voadona tombontsoa ny mpiray donak’afo vao hirokopaka…
Efa mety nisy dingana maromaro sy fotoana lavalava niaretana ny vahoaka ifotony vao tonga amin’izao fitsaram-bahoaka izao. Ahina vao mainka hitombo sy hiitatra na hivadika zavatra hafa izany, raha tsy hanapa-kevitra haingana amina vahaolana azo antoka sy maharitra. Inona? Fiaraha-midinika, fanorenana ifotony… Asa?
Ahina ho tratran’ny fitsaram-bahoaka ny mpitondra, raha tsy mahita afitsoka amin’izao. Vitan’ny fampitandremana sy fampahafantarana lalàna? Tsy misy mankasitraka izao fitsaram-bahoaka izao. Tsy mpiray tsikombakombana ve izay mitazam-potsiny na mpiraviravy tanana? Na mila hampahafantarina izay tokony hataony sy hampitandremana koa…